Ambohidratrimo - Nisy nandoro ny Rova
Vous êtes ici: Accueil → A la une → 2015 → août → 28 → Ambohidratrimo – Nisy nandoro ny Rova
Ambohidratrimo – Nisy nandoro ny Rova
Redaction Midi Madagasikara 28 août 2015 9 Commentaires featured
Tonga tamin’ny tanjony niriany ihany ireo olon-dratsy. Kila hotohoto afak’omaly alina ny Rovan’Ambohidratrimo, taorian’ireo fahamaizana efa impiry nanambana ity vakoka ity. Mbola maimbo solika fandrehitra teny an-toerana tamin’ny ora nahatongavanay teny.
Tapa-porohana sisa no hany navelan’ny afo. May avokoa ireo trano masina, vita amin’ny hazo teo ambonin’ireo fasana fito miandalana, niafenan’ireo mpanjaka nifandimby teny Ambohidratrimo Marovatana. Araka ny fanazavana nomen’ireo tompon’andraikitra sy ireo olona nanatri-maso teny an-toerana, dia tokony tamin’ny sivy ora sy sasany tany ho any no nanomboka niredareda ny afo. « Vao nanomboka nidedaka ny lela afo dia tonga teto izahay, ary nanaitra ny manodidina. Teo amin’ny tranomasina afovoany no niainga ny afo, izay tsy tana intsony, noho ny hamafin’ny rivotra tamin’io fotoana io », hoy Atoa Sahaza. Maimbo solika fandrehitra ny iray vohitra tamin’io alina io. Mbola nahitana tavoahangy nisy izany rahateo teny an-toerana raha ny hita hatrany. « Roalahy no hitanay nihaodihaody teo am-bohitra tamin’io fotoana io, talohan’ny nahatongavanay teo. Asa raha mbola saika handoro ilay tranomasina teo ambonin’ny fasanan’ny mpiambina mpanjaka izy ireo no nitsoaka » hoy hatrany ny fanazavana. Nifamonjena ny namono ny afo. Tonga teny an-toerana ihany koa ireo mpamonjy voina avy aty Antananarivo nifehy izany. Na dia izany aza, tranomasina iray sisa no hany niangana tamin’ireo fito teo an-toerana. Saika lasa lavenona avokoa ireo ambiny. « Natao fanahy iniana nodorana ity rova ity. Porofon’izany ny fisian’ireo tavoahangy nandrarahana « pétrol ». Noho izany tsy maintsy manokatra fanadihadiana ary efa am-pikarohana ireo nahavanon-doza izahay» hoy ny tompon’andraikitry ny zandary eny an-toerana. « Tsiahivina fa efa imbetsaka ihany ity Rova no nokasain’ireo tsy mataho-tody nodorana, kanefa dia ny manodidina foana tamin’izay no may. Ankehitriny, ireo tranomasina mihitsy no may. Tsy mahasakana ny olona tsy hanome hasina ity toerana ity anefa izany », hoy Rtoa Saholy, tompon’andraikitra voalohany eny an-toerana. Teo anatrehan’izao voina izao dia samy tonga teny an-toerana avokoa ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny avy. Omaly folakandro kosa no tonga nijery ny zava-misy teny ny Praiministra Lehiben’ny governemanta, nanameloka izao fanimbazimbana ny vakoka isan’ny maha izy azy ny Malagasy izao.
Iza no ao ambadik’izao ? Inona no tiana ahatongavana ? Mbola fanontaniana goavambe mipetraka eny imolotry ny rehetra. Marihina fa vao andro vitsitsy lasa izay no nisy nandoro ihany koa ny Rova teny Ambohitrimanjaka. Mitovy tsy misy valaka tamin’ity teny Ambohidratrimo ity ihany fomba nampiasain’ireo olon-dratsy satria dia mbola navela teo ihany koa ny tavoahangy nisy ny solika natao handrehetana izany. Tao anatin’izany anefa toa tsy nisy fepetra raisina niarovana ireo Rova hafa. Araka ny fantatra mantsy dia tsy misy mpiambina akory ity eny Ambohidratrimo ity, eny fa na dia teo ihany koa aza ilay saika nahamay izany, volana maromaro lasa izay. Andrasan’ny maro amin’izao fotoana izao ny fepetra ho raisin’ny Fanjakana. Inoan’izy ireo fa hisy ny drafitra matipaika ho raisina, fa tsy hoe sanatria hanao fitsaboana aorian’ny fahatesana foana …
raj 13 septembre 2017 at 6 h 50 min · Edit
Izahay taranak’andriana tany dia tena malahelo mihintsy. Ahoana ny lapin-drazanay no dorana otrzao???
Lazalazao Tsimiamboholahy 8 septembre 2015 at 0 h 23 min · Edit
Tena mampihomehy be ianao ry mpitazana hahahahahahaha…. heverinanao fa vendrana tahakanao izao ny olona ? Ireo firesakao ireo dia efa porofo fa sahirana mafy ianao manakatra avoavo..
Mahiratra 1 septembre 2015 at 17 h 24 min · Edit
Rehefa mihetsika ny tanan’ilay raikalahy zay d misy zava-doza mahazo an’Antananarivo foana matetika…nanomboka t@ nandorana ny Rovan’i Manjakamiadana, d tsarovy koa ny fahaverezan’ny satroky ny mpanjaka tao Andafiavaratra d io izy avy namoaka boky hono, dia may ny Rovan’Ambohidratrimo…
mpitazana 29 août 2015 at 16 h 27 min · Edit
Hatrany amboalohany andron-dRalambo ka hatramin’izao 2015 izao dia ny foko tia mifamono sy tia miady sy mifampila vanina indrindra eto Madagasikara dia ny Merina hita taratra izany na eo amin’ny ara-panjakana na any anaty fiaraha-monina (Andevo hoe, Andriana hoe , Hova hoe , mainty entin-dreny hoe,tsalo petsanga,baomanga) tena mamoafady raha misy tanora roa mifankatia ka tsy mitovy firazanana dia tena mandalo sedra mafy tokoa .
Ary mino aho rehefa hita izay nanao izao zava-dratsy izao dia tsy maintsy taranaka Merina io toy ilay nandoro an’i MANJAKAMIADANA izay efa nahavita ny saziny.
mpitazana 29 août 2015 at 16 h 10 min · Edit
Misy ankolafim-pivavahana manao fampianarana ara-bakiteny sy tsy mifanaraka amin’ny vanim-potoana ary ny tontolom-piarahamonina ny BAIBOLY. Dia izay no miteraka izao herisetra izao, efa hita taratra ny fihetsik’izireny eo anivon’ny fianakaviany na ny fiaraha-monina misy azireo.
Antokom-pivavahana mahery vaika no mpanao izao fihetsika izao na koa anefa mety ho tanora tsy manankatao mpifoka zava-mahadomelina dia manao izao fihetsika mampalahelo izao .
Tokony handray andraikitra ny mpanabe rehetra na ara-pivavahana na ara-panjakana fa tsy mitsahatra mihasimba ny fiaraha-monina Malagasy
Harovy ny vakoka sy ny Tantaram-pirenena fa ireny dia anisan’ny fofototry ny fampandrosoana.
Ny maro an’isa amin’ny Malagasy dia manaja ny HASINA maha Malagasy azy
ary tsy menatra amin’ny fomban-drazany. Ireo marivo salosana no mian-kendry toa tsy hay izay ilazana azy, satria ireo firenena mandroso dia tena sarom-piaro tokoa amin’ny vakoka, fomba-drazany ary ny tantarany ary velom-belominy isan’andro am-pon’ireo tanora sy ny vahoaka ao amin’izany.
Jean Andonizara 29 août 2015 at 12 h 18 min · Edit
tsy misy resaka adim-poko izany io ,fa aoka ny gasy hitandrina ,efa hoe secte io ,efa maro ireo toerana misy tantara sy amasiny olona ireny manerana any Madagascar no misy mandoro fa ilay izy moa rehefa any aminy sisiny dia tsy misy resaka fa hatramin’izay dia izay tratra dia ireo olony secte foana,tiany ho porofoina hono fa tsy misy mitaha izany ny razana ary ireny hono tsy mila tomoina na andriandriany ,mitovy aminy ataonireo islamiste nanapoaka ny tsangambatony bouda sns
Lazalazao Tsimiamboholahy 29 août 2015 at 1 h 09 min · Edit
Ny Merina aloha no kendrena @ ity. Ary faizina mihitsy satria raha misy foko hafa manao fikambanana na hetsika isan-karazany eto Antanarivo dia tsy misy resaka. Fa raha vao tonona kosa ny hoe MERINA dia ny ambany saina iray monontolo miantso hoe : manavakavaka. Nefa anie tsy mbola nisy Malagasy avy @ foko hafa nisy namono teto Antananarivo fa efa nisy Merina maro novonoina tany @ sisiny.
Louis Rajelison 29 août 2015 at 0 h 02 min · Edit
secte aona kay tompoko afaka fakafakainao ve de amin(ny antony inona. Misaotra
Jean Andonizara 28 août 2015 at 23 h 37 min · Edit
mba aza fohy fisaiana ihany ,SECTE no ao ambadikan’io ,hotran’ilay tant Fianarantsoa nandorandreo Baiboly